Olee otú iji chebe gị wireless ekwentị hackers | Site na Linux
Ma ọrịa ọrịa SARS-CoV-2 akpaliri gị ịkpọtụrụ n'ụlọ, maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ka obi dịkwuo n'ụlọ gị ma ọ bụ n'ọfịs, ị kwesịrị ịma na na ikuku igwe na VoIP ha bu ihe ndi otutu cybercriminals na-acho imegide ulo oru ma obu ndi mmadu.
Buru n’uche na a cyberattack nwere ike iduga nnukwu nfu maka azụmahịa, yana ịchefu ozi dị nro sitere na ụlọ ọrụ n'onwe ya ma ọ bụ site na ndị ahịa. Ya mere, iji gbochie ha ige ntị na mkparịta ụka gị, ị ga-agbaso ụfọdụ ndụmọdụ bara uru nke ị nwere ike itinye n'ọrụ.
2 Yabụ ekwentị na-enweghị eriri dị mma?
3 Otu esi echebe ekwentị gị na mwakpo ikuku
3.1 Specific jikoro maka ekwentị VoIP
4 Ndị ọzọ jikoro
Ndị ochie akara ala ha ka dị ndụ n'ọtụtụ azụmaahịa na ụlọ, ọ bụ ezie na nwa obere nwayọ ejiri ekwentị na VoIP anọchi ha. N'agbanyeghị afọ ndụ ha, ha ka bụ otu n'ime usoro nkwukọrịta kachasị kwụsie ike maka ịkpọ oku ogologo oge.
Otú ọ dị, ofu telephony nwekwara ọ gbanwere ezi a bit na-adịbeghị anya ọtụtụ iri afọ. Site na telifon oge ochie gaa na ekwentị enweghị eriri dị ugbu a. Ikuku technology aghọwo dị ọnụ ala karịa ma na-eto ruo mgbe ọ jisiri ike na-ewepụkwa ot ekwentị.
Ọhụrụ na-enweghị eriri ekwentị gị zere njedebe USB, inwe ike ịkwaga ebe ịchọrọ mgbe ị na-akpọ oku, ọ bụrụhaala na ị nọ n'okpuru mkpuchi mkpuchi nke teknụzụ ikuku eji.
Enwere ike ịdebe ahịrị waya ndị ochie na ekwentị, mana enwere ike ịme ya na ikuku ọgbara ọhụrụ na akara VoIP. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ekwentị ugbu a enweghị eriri ejirila jiri ya AM ebili mmiri redio agbasa ozi n'èzí na-enweghị nchebe (enwere ike ijide ha) ọbụlagodi nkwukọrịta nwere teknụzụ dijitalụ ezoro ezo iji kpuchido ya na ntị ntị.
Yabụ ekwentị na-enweghị eriri dị mma?
Ha adighi adi ọ dịghị ihe 100% ijide n'aka, cybercriminals na-ahụ adịghị ike ọhụrụ na ụdị mwakpo iji mepụta mwakpo ahụ. Ọzọkwa, dabere na teknụzụ ekwentị ikuku gị na-eji, ọ nwere ike ịdị mfe ma ọ bụ obere mfe igbochi mkparịta ụka.
Ọ bụrụ na ekwentị ikuku ị nwere ekwupụtaghị na o nwere nkà na ụzụ DDS (Digital Spread Spectrum) ma ọ bụ DECT (Digital Enhanced Cordless Technology), mgbe ahụ ị ga-ebufe na teknụzụ analog (ọbụlagodi na ha enweghị ikuku).
Bụrụ na nke ịdị analog, ị ga-n'ihu nke wireless phones kachasị ngwangwa. Ọ bụ ezie na ndị dijitalụ dịtụ nchebe karị, mana ha enweghị mwakpo ọgụ nke ndị ọzọ ga-ege ntị na mkparịta ụka ị na-enwe. Fọdụ pentesters na cybercriminal jisiri ike gbochie mkparịta ụka ezoro ezo DECT dịka nke ụfọdụ ndị na-emepụta ekwentị ekwentị taa na-eji.
Iji nwee ike igbochi mkparịta ụka, ndị mwakpo ga-achọ sọftụwia na ngwaike akọwapụtara. Na mgbakwunye, akụrụngwa ngwanrọ bụ emeghe emeghe na n'efu, ya mere o siri ike inweta ihe ị chọrọ maka nledo. Ọ bụ ezie na ngwaike dị mkpa gafere site na ịnwe PC na otu kaadị ntanetị ikuku maka DECT (ọ dabara na ọ dịghị mfe ịchọta ma ọ bụ ọnụ ala).
Taa DECT na-agbanwe iji mejuputa ya usoro nche ohuru na ọkọlọtọ iji mee ka ọ dị nchebe. Mana ọ bụghị ekwentị niile na-enweghị eriri ga-anabata ha, yabụ enwere ike ịnwe ọtụtụ ụdị adịghị ike.
Otu esi echebe ekwentị gị na mwakpo ikuku
Dịka, ọ gwụla ma ụlọ ọrụ gị ga - ejikwa ya ozi bara uru karịsịaỌ bụghị uru ịzụta akụrụngwa dị mkpa ka ndị nledo na ụfọdụ lekwasịrị anya. Mana nke ahụ ekwesịghị ime ka ị zuru ike, ebe ọ bụ na ozugbo cybercriminal nwere ihe dị mkpa, ha nwere ike iji ya maka ọtụtụ ndị ha metụtara.
Uru ọzọ dị na ụdị teknụzụ a bụ na ịhapụ data mkparịta ụka DECT ọ dị mkpa maka ndị omekome cyber nke a na-esote gaa na akụrụngwa ebe itinye ekwentị ikuku. Ihe dị mma bụ na mkpuchi mkpuchi nke ndị a adịchaghị oke, yabụ ọ na-esiri ike ijide mgbaama ahụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụfọdụ ndụmọdụ na i kwesiri iburu n'uche bu:
Ọ bụrụ n’inwe ekwentị na-enweghị eriri analog, gbanwee gaa na DECT dị nchebe karị. Ọ bụrụ n ’ị bụ onye nzuzu, jiri ekwentị dị nro were kpọọ oku kacha dị mwute ma ọ bụ otu zoro ezo nke VoIP.
N'ime nnukwu ọfịs ma ọ bụ ụlọ, tinye ekwentị ahụ n'etiti ụlọ ahụ. Nke a ga - eme ka o sikwuoro ike ịtinye ihe mgbaàmà ndị ahụ. Ọ gaghị adị nso na mgbidi nwere ebe dị ya nso, ma ọ bụ n'akụkụ mgbidi mpụta nke ụlọ ahụ.
Specific jikoro maka ekwentị VoIP
na Ekwentị VoIP Ha na-eji usoro IP ahụ eme ihe iji mezuo nkwukọrịta, kama iji waya eme ihe otu ka nke ọdịnala. Yabụ, ọ dị mkpa itinye usoro ndị ọzọ dị iche iche iji gbalịa imezi nchebe nke netwọkụ gị:
Iji rawụta na VPN iji zoo ozi ntanetị niile nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ maka ichedo nkwukọrịta VoIP.
Enwere ike iji VLAN dị iche maka ekwentị site na netwọkụ ị na-eji achọgharị.
Tinye ego na ụlọ ọrụ cybersecurity nwere ike ịme nyocha nchekwa na netwọkụ gị iji mee ka adịghị ike ọ bụla nwere ike ịdị.
Zụọ ndị ọrụ gị, n'ihi na mgbe usoro ahụ dị nchebe, ụzọ kachasị mma iji nweta ihe ịchọrọ bụ ịga maka njikọ kachasị ike: onye ọrụ.
Ndị ọzọ jikoro
Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ichedo akụrụngwa, ọ dịkwa dobe usoro nche maka ndị ọrụ gị na maka onwe gị n'ọfịs. Ya mere, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịkwanyere usoro usoro ndị ọzọ aka ebe enweghị ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ọgwụgwọ dị mma megide Covid-19. Basiczọ ndị a bụ isi:
Nọgide na-enwe ebe nchekwa nke dị mita abụọ n'etiti ndị mmadụ ma zere igwe mmadụ.
Yiri ihe nkpuchi akwadoro mgbe ọ bụla gị na ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí ma ọ bụrụ na enweghị ike idobe nchekwa nchekwa.
Washingsa aka na nsị mmiri.
Jiri mkpuchi mkpuchi, uwe aka, na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Olee otú iji chebe gị wireless ekwentị hackers
Ọ dị egwu otú ihe niile metụtara ịntanetị nwere ike isi bụrụ ndị na-enweghị ike, a maara na afọ a enweela mwakpo dị iche iche na ntanetị dị iche iche. Karịsịa, cryptocurrencies bụ ndị wakpoola ọtụtụ afọ a, mana nke a apụtaghị na ha anaghị ebunye nchekwa na nghọta. Ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe ikpo okwu cryptocurrency na-enye m https://www.mintme.com